(tonga teto avy amin'ny Fiteny indo-iraniana)
Ny fiteny indô-iraniana vondrom-piteny sampan' ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana, izay ahitana ireo fiteny iraniana sy ireo fiteny indô-ariana ary ny fiteny noristany.
4.1 Fiteny indô-eorôpeana
Ny fiteny zazaky dia fiteny tetenin'ny vahoaka zaza ao amin' ny faritr' i Dersim sy i Elâzığ ary i Diyarbakır ao Torkia. Isan'ny fiteny korda ny fiteny zazaky. Misy miteny azy koa ny ao amin' ny faritany sasany ao Kordistàna (ao atsimo).
Ny fiteny farsy na persàna dia fiteny ôfisialin'i Iràna sy be mpiteny indrindra ao amin'io firenena io (ao afovoany, ao afovoany atsimo, ao avaratra atsinanana), ao Afganistàna ary ao Tajikistàna. Ahitana olona miteny azy koa ny ao Bareina, ny ao Katara, ny ao amin'ny Emirata Arabo Mitambatra. Endriky ny fiteny persàna isam-paritra koa ny fiteny dary (fiteny ôfisialy ao Afganistàna), ny fiteny tajiky (fiteny ôfisialin'i Tajikistàna) izay tenenina koa ao Kirgizistàna, ao Torkmenistàna, ao Ozbekistàna ary koa ao Kazakstàna. Ny fiteny dary dia endriky ny fiteny persàna (na farsy) teneina indrindraindrindra ao Afganistàna. Ny fiteny tajiky, na fiteny tôjiky, dia endriky ny fiteny persàna (na farsy) tenenina ao Tajikistàna.
Ny fiteny pastô dia fiteny iraniana atsinanana izay tetenina ao Afganistàna (isan' ny fiteny ôfisialin' io firenena io, manampy ny fiteny persàna sy ny fiteny dary) sy ao Pakistàna sady tetenin' ny olona miisa 45 000 000 any ho any.
Ny fiteny gojaraty no fiten' ny tompontanin'i Gujarat. Misy olona 46 tapitrisa no miteny gojaraty any India sy maneran-tany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_indô-iraniana&oldid=999897"
Dernière modification le 4 Janoary 2021, à 15:20
Voaova farany tamin'ny 4 Janoary 2021 amin'ny 15:20 ity pejy ity.